ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:19 PM
ဖတ်ဖူးသလိုပဲ .. ဆင်လို့လားမသိဘူး။
ဇတ်လမ်းလေးက ရင်ထဲမှာ တမျိုးလေးပဲ။ ထား ကိုပဲ သနားသလို ဖြစ်မိလာတယ်။
ကိုဏီလင်းတစ်ယောက်တော့ ဇာတ်လမ်းထဲမျော မျောသွားပါတယ်ဗျာ....။
ဒီပိုစ့်လေးက ခံစားချက်တွေ တိုက်ဆိုက်လိုက်တာဗျာ...။
စိတ်ကူး ဇာတ်လမ်းလေးပဲ ကောင်းတယ်ဗျာ..။
မြန်မြန်ဆုံတော့ မြန်မြန်ဒဏ်ရာ သက်သာမှာပေါ့
ဇာတ်လမ်းလေး ကောင်းပါ၏. ဆက်ရေးပါ အားရင် လာ အားပေးမယ် နော်. ပျော်ရွှင် အောင် မြင်ပါစေ...
အဲဒီလိုမျိုးတွေကို မခံစားနိုင်ဘူး :(